Vafambi vekuzorora vemuUS vanogara pamba se COVID-19 kesi dzinokwira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Vafambi vekuzorora vemuUS vanogara pamba se COVID-19 kesi dzinokwira
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nemhaka dze COVID-19 dzichikwira uye zvekufamba zvichikwira patinopinda mumatsutso nemwedzi yechando, indasitiri yehotera iri panzvimbo yakakosha.
69% yevafambi vekuzorora veUS vangangotora mashoma mafambiro.
42% yevafambi vekuvaraidza vekuUS vangangodzima nzendo dziripo.
55% yevafambi vekuvaraidza vekuUS vanogona kudzosera nzendo dziripo.
Vafambi vekuvaraidza vekuUS vanoronga kudzosera kumashure zvirongwa zvekufamba pakati pekukwira kweCOVID-19 kesi, iine 69% inoronga kutora nzendo shoma, 55% kuronga kudzosera zviripo zvekufamba, uye 42% vangangodzima zvirongwa zviripo pasina kudzokororazve, sekureva kuongorora kwenyika kwakaitwa pachinzvimbo che American Hotel & Yekugara Association (AHLA). Vanenge vatatu muvana (72%) vangangofamba kuenda kunzvimbo dziri mukati mechairi chekutyaira.
Nepo mafaro ekuzorora enhoroondo anotanga kudzikira mushure meZuva reBasa, zvinoramba zvichikosha gore rese. Tsvagurudzo nyowani iyi inoratidzira kuenderera kwakashata kwedenda iri pakufamba uye kunosimbisa kudikanwa kwekununurwa kwemubatanidzwa, kwakadai seSave Hotel Jobs Act.
Anopfuura rimwe chete muvashanu emabasa emahotera akarasika mukati mehosha iyi - vangangoita mazana mashanu ezviuru zvachose - anenge asina kudzoka pakupera kwegore rino. Kune vese vanhu gumi vanoshanda zvakananga pane imwe nzvimbo yehotera, mahotera anotsigira mamwe mabasa makumi maviri nematanhatu munharaunda, kubva kumaresitorendi nekutengesa kumakambani anopa hotera - zvichireva kuti mamwe mabasa anotsigirwa nemahotera emamirioni 500,000 ari munjodzi.
Kuongororwa kwevanhu vakuru mazana maviri nemazana maviri kwakaitwa Nyamavhuvhu 2,200-11, 12. Pakati pavo, vanhu 2021, kana 1,707% yevakabvunzwa, vafambi vezororo-kureva kuti, avo vakaratidza kuti vanogona kuenda kuzororo muna 78. Zviwanikwa zvakakosha pakati pevafambi vezororo zvinosanganisira zvinotevera:
69% vanogona kutora nzendo shoma uye 65% vangangotora nzendo pfupi
42% vangangodzima zvirongwa zvekufamba zviripo vasina hurongwa hwekugadzirisazve
55% vangangodaro vachidzosera zvirongwa zvekufamba zviripo kusvika musi unotevera
72% vangangoenda kunzvimbo dzavanogona kutyaira kuenda
70% vanogona kufamba nemapoka madiki
Nemhaka dze COVID-19 dzichikwira uye zvekufamba zvichikwira patinopinda mumwedzi yekudonha uye yechando, indasitiri yehotera iri panzvimbo yakakosha. Kunze kwekunge Congress zviito, kutapukirwa-zvine chekuita nerwendo kudzikira kucharamba kuchityisidzira hupenyu hwemazana ezviuru evashandi vemuhotera. Kwerinopfuura gore, vashandi vemuhotera uye varidzi vemabhizimusi mudiki nyika vanga vachikumbira Congress kuti igadzirise denda chairo. Iyi data inosimbisa nei yakwana nguva yekuti Congress iite.
Ichangoburitswa AHLA mhedzisiro yekuongorora inoratidza kuti vafambi vebhizimusi vari kuwedzera zvakare zvirongwa zvavo zvekufamba pakati pekukwira kweECVID-19 kesi. Izvi zvinosanganisira 67% kuronga kutora nzendo shoma, 52% vangangodzima zviripo zvekufamba pasina kudzokororazve, uye 60% kuronga kudzosera zviripo zvekufamba zviripo.
Mahotera ndiwo ega chikamu chevashanyi neindasitiri yekuzorora vachiri kuwana rubatsiro rwakananga kunyangwe vari pakati pevakanyanya kurohwa. US Congress inokurudzirwa kupfuura bipartisan Save Hotel Jobs Act yakaunzwa naSenator Brian Schatz (D-Hawaii) uye Rep. Charlie Crist (D-Fla.). Mutemo uyu unopa hupenyu kuvashandi vemuhotera, zvichipa rubatsiro rwavanoda kuti vararame kusvikira mafambiro adzoka kumatanho epachirwere.
Svondo 30, 2021 pa 06: 35
Kana uchinzwa kurwara kana kusagwinya, ndapota gara kumba. Taura nachiremba kana zvichidikanwa. Kugadzirisa kuwedzera kupararira kwecoronavirus muCanada, zvirambidzo zvekufamba zviripo munzvimbo dzese dzekuyambuka muganho. Pindura mibvunzo mishoma kuti uzive.